Modely fanolokolo mody 2018 - inona ny loko sy ny endriky ny fantsika amin'ny lamandy amin'ny 2018?
Fanamboaran-tsofina 2018 - hevitra mendrika indrindra amin'ny vanim-potoana vaovao
Ny fantsika fantsika fantsika 2018 dia singa tena ilaina amin'ny famoronana sary maoderina sy mahatalanjona amin'ny fashionista rehetra. Amin'ity tranga ity, ny anjara andraikitra manan-danja dia taratry ny fisafidianana ny antsipiriany isan-karazany: ny endrika sy ny lavany ny takelaka fantsika, ny safidy ny loko ary ny firavaka fanoratana.
Modely fanala amin'ny 2018
Stylists, mamorona fantsika amin'ny 2018, tarihan'ny lamaody farany amin'ny lamaody, izay ahafahanao mitanisa ireto manaraka ireto:
Ny art nail dia mahazatra, izay mirakitra ny loko rehetra misy loko iray, ary vitsivitsy amin'izy ireo ihany no novonoina miaraka amin'ny sary maneho ny sary eo am-piandohana sy ny endriky famokarana;
Ny karazam-borona rehetra sy ny firavaka rehetra dia tena malaza, mety ho faribolana, triangles, zana-kazo, tsangantsanganana, rhombuses, ravina ary andalana hita any amin'ny lalana samihafa;
Manome fiononana mahazatra afaka kamifubuky , loko kely mamiratra amin'ny loko isan-karazany, izay ampiharina amin'ny fototra mangarahara na miloko;
Ny tena izy dia ny famolavolana ny fantsika 2018, izay misy singa mazika na tasy misy tasy;
Ny famintinana misy ny varotra izay manana rafitra samihafa, ohatra, ny famerana glossy dia azo ampiharina lavaka na vice versa;
Ny tena mahavariana dia tsy mitovy amin'ny dingana volomparasy eo amin'ny loko lehibe;
Mankasitraka ny fampiasana karazan-kazo rehetra: ny fasika samihafa, ny fametahana ny loko miraratra, ny firavaka vita amin'ny fanampiana ny modelina,
dia manintona ny saina amin'ny tenanao, raha mampihatra ny teknikan'ny ombre ianao, rehefa miova tsikelikely ny iray hafa. Amin'ity tranga ity, dia mendrika ny manamarika tsikelikely ny geometrika, izay ahafahana mampiova ny tonony amin'ny fanaovana dika kely kely.
Inona no endriky ny fantsika amin'ny lamandy amin'ny 2018?
Ny iray amin'ireo singa fototra amin'ny famoronana hoso-doko tena tsara dia ny endrika lamaody lamaody 2018. Azonao atao ny manonona ny karazany toy izany:
Ny endriny tena izy dia endrika spatula. Amporisihina ny rantsana kely amin'ny boribory, izay manome ny fiantombohan'ny zana-boalavo;
Ny endrika oval koa dia tsy mamoy ny toerany eo amin'ny lamaody Olympus ary hiantso ireo tia ny kilasy. Amin'ny fanampiana an'io endrika io, ny famolavolana ny fantsika fohy 2018 dia azo atao;
Ireo zazavavy te-ho tia tombom-barotra, dia hankasitraka ireo marika maranitra. Ity endrika ity dia hijery tsara indrindra amin'ny takelaka lava lava.
Lamba mody lava 2018
Rehefa manapa-kevitra ny fomba hanamboarana ny fantsika amin'ny 2018, ny zavatra manan-danja dia fotoana maharitra. Ireto misy fiovana manaraka:
Afaka mifidy amin'ny dikan-tsoratra tsotra ianao, ny halavany amin'ny antsasany. Hahita tsara ny fandehan-javatra sy ny fonony rehetra izany;
Ny manicure amin'ny kiraro fohy 2018 dia hijery tsara sy hitovy tanteraka amin'ny tsipika isan'andro na orinasa;
Ny takelaka lava lava dia tsara indrindra ho an'ireo tia ny tsipìka tsy hay hadinoina. Amin'izy ireo dia azo atao ny mampiditra ny fisainana mampihetsi-po indrindra, mba hametrahana karazan-javatra rehetra. Amin'ny fomba mahomby indrindra, dia hiditra amin'ny sary hariva izy ireo .
Loko lamaody mody 2018
Ataovy ny sary tsy manam-paharoa dia hanampy ny lokon'ny fantsika 2018, ny stylists dia tarihan'ny lamaody toy izany:
Ny hanomezana lalina sy feno dia azo atao amin'ny laka mainty izay mety ho maotina, ary mamirapiratra;
loko tena izy ho an'ny hazo, marbra, hoditra reptilia;
Ny safidy mandresy amin'ny fandrosoana amin'ny andro Alahady dia ho lasa fantson-dranomamy maromaro, ireo dia lanja ara-batana, malefaka ary mavokely;
Afaka mijery mamiratra ianao raha mampihatra loko matevina: aquamarine, mavokely mavokely, mena , mavo, maitso maitso, orange.
Nails 2018 - hevitra momba ny lamaody amin'ny vanim-potoana
Amin'ity vanim-potoana ity, ny Stylista dia afaka maneho tanteraka ny fisainany amin'ny alalan'ny famoronana fantsika ny 2018, lohahevitra lamaody izay tena samihafa. Anisan'ireo tena manan-danja amin'izy ireo ireto manaraka ireto:
Ny tena tifitifitra dia ny famokarana, fomba iray izay maneho ny tendrony amin'ny fantsika toy ny fonosana madinika, izay maneho ny loko misy loko hafa;
Ny novokavoka maoderina dia azo antsoina hoe ny fanokanana fanokafana 2018, natao tamin'ny fanampian'ny gidro, natolotra tamin'ny lohahevitra samihafa. Ohatra, izy io dia mety ny voninkazo, ny biby, ny firavaka geometrika, ny soratra, ny lamaody modely.
Ny fampiasana ny lakolon'ny thermo dia ahafahanao manova ny loko manikira mandritra ny andro, arakaraka ny fepetra sy ny hafanana;
Ny varimbazaha maitso dia afaka manome ny fahaleovan-tena noho ny zava-misy eo amin'ny ety, mamorona fisaraham-panambadiana mahasalama maro;
manome loko iray tsy manam-paharoa mahazaka rhinestones izay miorina amin'ny rantsantanana iray amin'ny iray na maromaro, na manarona ny tava manontolo amin'ny takelaka fantsika;
Ny vahaolana tonga lafatra dia ny fisafidianana ny fitaratra amin'ny fitaratra, ny varaka miaraka amin'ny metaly iray, ny teknika ny fitaratra voapetraka.
Frantsay amin'ny fantsika 2018
Ny iray amin'ireo safidy iraisana indrindra dia ny endriky ny fantsika ho an'ny 2018, vita amin'ny endrika jaky. Azo atao ny manamarika ny fironana marina ampiasain'ny fampiharana azy:
Classics, izay ampiasain'ny loko mangarahara sy fotsy fotsy;
Ny firaiketam-peo mihidy tsy mihena dia tsy mahavery ny maha-zava-dehibe azy: beige, mofomamy, akora, mavomavo. Afaka mamoritra ny tapany lehibe sy ny tendron'ilay takelaka fantsika izy ireo;
Ny fisehoana ivelany dia afaka mitandrina lamosina, manamboatra lamina na sary;
Ireo ankizivavy tia ny tsipìka dia afaka mampiasa voankazo mamirapiratra, izay manala ny tendron'ny fantsika.
Sary famantarana amin'ny fantsika 2018
Ataovy tsy manam-paharoa ny fanaovana haingon-koditra raha mampihatra sary amin'ny lamaody amin'ny hentitra 2018. Misy fiovana toy izany eo amin'ny vehivavy amin'ny sokajin-taona rehetra:
Famoronana loko sy ravina amin'ny rantsantanana iray na maromaro;
sarin'ny biby na dika mifanitsy aminy: leoparda, famafy eo ambanin'ny hoditry ny biby mandady;
ao anatin'ireo sehatra farany, zava- kanto mahagaga mahatalanjona miaraka amin'ny gilasy ;
Ny famolavolana lamosina lamaody 2018 dia afaka manana endrika marevaka, geometrika, lacy;
Ny sary dia azo aseho amin'ny loko maro samihafa, miparitaka amin'ny rongony.
Ny fantsika ho an'ny 2018
Ny zazavavy dia afaka mijery ny vehivavy sy ny kanto indrindra, raha mifidy kiraro tsara ianao amin'ny 2018, vita amin'ny mofomamy vita. Misy ny fiovana toy izany amin'ny fampiharana azy:
Ny fantsika dia mety ho tanteraka tanteraka;
mamolavola loko matevina sy glossy;
Azo atao ny mamolavola lamina izay tanterahana amin'ny famolavolana glossy amin'ny tampon'ny vita vita amin'ny maingoka. Azo atao amin'ny endriky ny dantelina, tsipika geometry, ravina.
Fanamboarana fantsika fantsika fanakorontanana 2018
Ny fampiasana ny teknika sasantsasany dia ahafahanao manamboatra fikolokoloana tsara tarehy 2018. Ny iray amin'izy ireo dia vera misy ratra, satria manamarika ireo toetra mampiavaka azy ireo izany:
Tondraky ny tonta mitovy na mifanohitra;
Ny fitaratra fitaratra dia afaka manamboatra rantsantanana iray, na maro na iray atsy ho atsy;
Azo atao ny manamboatra ny fitaratra tapaka amin'ny ampahany sasany amin'ny fantsika, ohatra, ny ravina eo afovoany, faritra misy ny volana.
Mirongatra ny hoho 2018
Ny vahaolana tonga lafatra amin'ny takariva hariva dia ny fampiasana akorandriaka misy loko mirindra. Misy ny fiovana toy izany amin'ny fampiharana azy:
Azo ampiharina amin'ny loko hafa miloko volomparasy, mamorona miloko marevaka mahavariana;
Ny varotra fitaratra dia azo ampiasaina amin'ny tenany manokana ary manana loko manokana, ohatra, ny fantsika ny fantsika volamena dia tena mahatalanjona, ny endriky ny 2018 ao anatin'ity fampisehoana ity dia mahazatra. Ny safidy iray hafa dia ho varahina metaly.
Famolavolana paolika 2018 amin'ny rhinestone
Fikarakarana fialana amin'ny fehiloha amin'ny volana Janoary 2018, izay aseho amin'ny endrika samihafa amin'ny endrika, ka anisan'izany ireto manaraka ireto:
ny fametrahana ampongabendanitra amin'ny ampahany sasany amin'ny takelaka fantsika, ohatra, ny tendron'ny fantsika, ny faritra misy ny volana. Amin'ity tranga ity, ny faritra iray manontolo dia afaka feno rakotomamy ary misaraka amin'ny ampahany amin'ny alalan'ny vatokely;
Manala ny endrika tena izy tany am-boalohany, toy ny rantsana, ravina na kiraro mahatsikaiky;
toerana eo amin'ny tendrony amin'ny vozona misy vato maromaro;
Ny fandrakofana feno ny sisin-doko amin'ny tendrontany avaratra.
Ny famolavolan-kisarisary kodiarana 2018, novonoina niaraka tamin'ny fanampiana varn'y loko mamirapiratra, dia ho sahiran-tsaina sy tsy hay hadinoina. Misy fiovàna toy izany amin'ny endriny:
rakotra ny rantsantanana rehetra miaraka amin'ny loko monophonic misy loko mamirapiratra: orange, mena, akquamarine, violet, mavokely mavokely, salady, mavo ;
fanovozana ny akanjo, mitovy amin'ny loko na fifanandrinana;
manamboatra loko mamirapiratra amin'ny ampahany sasany amin'ny fantsika;
Afaka mamirapiratra sady manangom-bolo ny lantovaly lamaody 2018 ho an'ny fantsika fohy, eo amin'ny takelaka amin'ny halavan'ny halimo na amin'ny loha-nao.
Dresses Summer sy sarafàna 2015
Hevitra mahaliana ho an'ny lalana an-dalambe
Trends - Lohataona 2015
Ririnina eo amin'ny tany 2013
Mehendi eny an-tsoroka
Skirt-masoandro avy amin'ny tulle
Coats ho an'ny vehivavy feno
Sprouters ho an'ny hazo avo
Andraikitry ny desktop
Carbonara - recipes classique
Miangavy ao an-trano - prescription
Ny andriamanitra masoandro Ra
Lena matevina mena ao amin'ny lava-pofona
Nahoana no nofy ny divay?
Zheleznovodsk - mpizahatany mpizahatany
Sarafianarana ho an'ny zatovo
Fikarakarana spa amin'ny tarehy
Toetran'ny tohatra miendrika fandroana